Izisebenzi nelima lokuhlanza idolobha – Msunduzi News
NGESIKHATHI umphakathi uphuthuma ukuya emsebenzini ekuseni kusempondozamnenke ubuvika ocwazi kanye nokhula edolobheni. Abasebenzi baseMsunduzi beholwa iBambameneja ledolobha uNkk uNelisiwe Ngcobo badele imisebenzi yasehhovisi baya kohlanza idolobha mhla ziyisi-9 kwephezulu. Laba basebenzi bebenza lokhu ngaphansi kwesiqubulo i-Operation Mbo!.
Ephawula lowo obambe njengeMeneja kaMasipala uNkk uNgcobo uthe lokhu abakwenzayo kuyimpendulo ezikhalweni ebezivela nxa zonke: “Inhloso yalo mkhankaso ukuhlanza idolobha ngenxa yokuthi sithole izikhalo kosomabhizinisi abahweba edolobheni. Ngaphandle kwalokho nathi siyabona okuyizinkinga.”
Ube esegcizelelela ukuthi akusizi ukukhombana ngeminwe noma ukulindela ukuthi umsebenzi othize wenziwe ngabaqashelwe wona ngoba uma kunenkinga igama elilimalayo ngeloMkhandlu hhayi umnyango noma umsebenzi thizeni. Kulokhu nje uthe balekelela iMnyango emibili, obhekele ukuqoqwa kwemfucuza kanye nowamapaki
Uqhube wathi, “Ngingaba umuntu osebenza ehhovisi isikhathi esiningi kepha ngaphambi kokuthi kukhulunywe ngokuthi umasipala awunamali abantu baqale bawehlulele ngokuhluleka ukuhlanza idolobha, nokuyinto engubuso bukaMasipala.”
UNkk uBoniwe Zulu oyiMeneja kwaCommunity Services uthe okumqoka wukuthi lihlanzwe lonke idolobha ngisho namalokishi imbala. Wabe esethi okwamanje okwenza kubhekwe izindawo eziphakathi edolobheni wukuthi yizo ezingubuso bukaMasipala.
Isikhulu esisebenza eHhovisi leMeneja Yedolobha, uNks uMadeliene Jackson yena uthe: “Namuhla sizilungiselele ukuzithola singcolile nazo zonke izikhulu zeminyango eyahlukahlukene. I-Operation Mbo kimi isho ukuthi kuhlanganyele wonke umuntu ekutheni kuhlanzwe idolobha kube nokuziqhenya ngokuba yisakhamuzi saleli dolobha.”
UMnu uBongumusa Zondi osebenza kuHuman Settlements uveze ukuthi ukuba yingxenye yohlelo lokuhlanza idolobha yinto enesikhathi eside eyilangazelela ukuthi abe yingxenye yayo. “Bengibona ukuthi idolobha alihlanzekile ngale ndlela ekumele lihlanzeke ngayo, futhi bekungifakela ingcindezi njengomsebenzi kaMasipala ukuthi ngihamba kanjani endaweni enje. Lolu hlelo ngibona kumele luqhubeke lwenzeke njalo,” kusho uMnu uZondi.
UMnu uWisman Thabethe oqhamuka kwaRoad & Transportation yena uveze ukuthi ukubamba kwabo iqhaza ku- Operation Mbo kuzobenza baqonde ukusebenza kweminye iminyango bangazi lo abasebenza kuwona kuphela. “Lolu hlelo luzokwenza ukuthi kube nesesisindo njengoba uMasipala enenhloso yokuba nedolobha elihlanzekile, sizokwazi nokuvula imisele esanda kuvalwa imvula ebinamandla kanjalo nezitamukoko zivuleke ukuze zikwazi ukwamukela amanzi,” kusho uThabethe.
Inkosazane ebibonakala ithukile ibona abasebenzi bakaMasipala beyifu uMpume Zondi waseWillowfontein uthe uyathuka ukubabona bekanje ngoba ababukeki benenswebu yokusebenza emgwaqweni. Lokhu kuzikhandla kwabo beyizikhulu ubona kuwukukhombisa kwabo ukukhathalela idolobha. “Le nto abayenzayo izosiza ekutheni noma sekufika izivakashi idolobha lihlezi lisezingeni eliphezulu. Ukube benginesikhathi kwamina luqobo bengizoba yingxenye yabo ukuze sibe sendaweni ehlanzekile,” kusho uNks uZondi.
Bekunowesilisa okha amanzi emgwaqweni uPietermaritz, uMnu uSiyanda Xaba ohlala emgwaqweni. Le nsizwa iveze ukuthi isebenzisa la manzi angasetshenziswa ukuze ikwazi ukuphila. “Isigubhu samanzi ngasinye ibiza ama-R8.00. Ngisidayisela labo abashayela amatekisi ukuze bahlanze izimoto,” kusho uMnu uXaba. Uthe njengoba besuke beyokha amanzi basuke bengazi ukuthi ngubani ozothenga amanzi kodwa basuke besazoyowadayisa emarenki.
Bashiya izigubhu phakathi esitamukokweni nokungase kube nobungozi bokuvaleka kwazo. Isitamukoko besivalekile nokungazeki ukuthi ngabe asivalwa yini izona lezi zigubhu. UXaba uthe akakaze acabange ukuthi ukushiya kwabo izigubhu esitamukokweni kungaba nobungozi bokusivala. “Uma lina siyazikhipha nantambama siyazikhipha ngoba isifuni zigcine sezintshontshwa.”
Ephawula ngalokhu uNks uJackson uveze ukuthi kokwenziwa nguXaba alikho icala, kunalokho yena ubona usomabhizinisi, “Akwenzayo akuphuli mthetho kaMasipala. Kubalulekile ukuthi aqonde ubumqoka bempilo yabantu kanye neyakhe ngokuqaphela ukuthi ekuhwebeni kwakhe ngabe amanzi lawo ahlanzekile yini noma akulungele ukuphuzwa ngumphakathi. Okwesibili wukuthi izigubhu azisebenzisayo azigcini seziyimfucuza engenza umonakala lapho amanzi engasakwazi ukungena lapho okumele aye khona,” kusho uNks uJackson.
Akunankinga ngoba mina ngimbuka njengomuntu obuke ithuba wacabanga ibhizinisi, ngoba ngeke sikubalekele ukuthi la manzi ngeke asasebenza, kuphela kumele baqaphele ukuthi bangashiyi izigubhu zabo esitamukokweni ngoba zingaba nobungozi uma sekunezikhukhula.
Umshayeli wemeter taxi uMnu u-Andile Mahlaba ujabulile ngesenzo sabasebenzi bakaMasipala. “Besesihlaselwe ukhula la sima khona. Lolu hlelo luyasilekelela njengabashayeli hhayi bamatekisi kuphela ukuthi kungabi khona mshayeli ozohamba ebaleka emgwaqweni ngoba evika okuthize. Ngibona ukukhathalela izakhamuzi mina kubasebenzi bakaMasipala,” kusho uMnu uMahlaba. Osebenzela iMsunduzi Pietermaritzburg Tourism Association uNkk uZama Nxasana uveze ukuthi lolu hlelo luzogalela kakhulu kulo mkhakha abakuwona.
“Ukuhlanzeka kwedolobha kuzoheha izivakashi, zibe nesithombe esihle ngendawo eyinhliziyo yomnotho wethu,” kusho uNkk uNxasana.
UMasipala yikhaya labo bonke abantu
Previous post: Iyacabeka eyokukhulisa umnotho wendawo eMsunduzi
Next post: Kube yizinyembezi zenjabulo kugogo